Kulo myalezo sizobheka ngokucophelela ama-conglomerate amakhulu athatha izinkampani eziningi zokubamba iminyaka embalaka edbalwa – i-Endurance International Group – i-EIG.
I-EIG, eyake yaziwa njengeBizLand, mhlawumbe ingumdlali omkhulu kakhulu embonini yanamuhla yokubamba iwebhu อ่านเพิ่มเติม yaqala ukusungulwa njengenkampani yokubamba iwebhu ngo-1996 futhi iyi-HQ eBurblington, Massachusetts ในปี 2554, i-EIG yatholakala ngabakwa-Accel-KKR kanye nabakwaGS พันธมิตรทุน ngenani elingaveziwe.
Namuhla, inkampani kufakwe kuhlu ku-NASDAQ futhi zenani lama- $ 686.7 wezigidi (ukuhweba ngama- $ 3.51 – $ 7.74 kumaviki angama-52 adlule).
Ngalesi sikhathi sokubhala, i-EIG inamagama angaphezu kwe-80 เว็บโฮสติ้ง ngaphansi kwesambulela sayo (ngaphezulu ngalokhu maduze) kanye namakhasimende e-4.9 akhokhela emhlabeni wonke.
Bonke ababhalisile epulatifomu ye-EIG nisDisemba 31, 2019 babeyizigidi ezingama-4.766; kuqhathaniswa nababhalisile abacishe ผู้หญิงสวย yizigidi ezingama-5.217 ngoJuni 30, 2017 kanye nezigidi ezingama-5.011
ababhalisile ngo-31 มีนาคม, i-2018.
Isifinyezo se-Endurance International Group Holdings, intengo yokwabelana ye-Inc ngonyaka owodwa edlule (ngoFebhuwari 2020).
ทรงเครื่องเว็บโฮสติ้ง – 2015
เว็บ SEO ของฉัน
Njengabo noma cha – kubalulekile ukuqonda ukuthi akuyona yonke imikhiqizo เจ้า – ความอดทน efanayo.
โยนลงไปใน etholakalayo ivela engozini kanye nokungaqiniseki – futhi njengoba abanye bangalindela, ezinye ze-EIG แบรนด์ "zishiywa ukuthi zifile" ngenkathi i-conglomerate iqhubeka ikhula futhi ithululela izimali kwezinye izindawo.
I-BlueHost, ngokwesibonelo, iqhubeke ukuchuma ngaphansi kokuphathwa kwayo okusha Inkampani ibuye yathuthukisa amawebhusayithi ayo, yengeza nezinhlu ezintsha zokubamba ezinhlelweni zabo, futhi yahlala njengenye ybonagawa aphezulu embonini yokusingathwa Akunakushiwo okufanayo nge-eHost, HostClear, ne-IX เว็บ Ukusingathwa – lezi zinhlobo zemikhiqizo azisekho namuhla futhi abasebenzisi bazo badluliselwe kwamanye amapulatifomu.
Okunye okutholwe yi-EIG akuzange kumenyezelwe / kumenyezelwe kahle Isibonelo nje singavumela ukuthi uSitelio athengiswe ku-EIG ngemuva kokuthi bavuselele imigomo yabo ใช่evisi nemininingwane yokukhokhisa.
InMotion Hosting – Ikhaya le-Web Hosting เป็นความลับ Eliveziwe!
Interserver – VPS ราคาประหยัดและยืดหยุ่น yokusingatha umhlinzeki.
Uhlu olugcwele lwe-EIG хостинг-бренди (+ Isiphakamiso se-хостинг E-Non-EIG)